Ota Kogyo Co. , Ltd. [Genvers] အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွင်အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ င်ရောက်မှု
Ota Kogyo Co. , Ltd. မှလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်။ အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်
Ota Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များ
Ota Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
# ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်အမြဲတမ်းအလုပ်များနေသောကြောင့်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများဆည်းပူးလိုသူများ၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်လိုသောသူများနှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားသော ၀ င်ငွေရရှိလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။လေးနက်သောလူ, ငါခိုင်မြဲစွာကအကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်!တစုံတခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
Ota Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်အကျဉ်းချုပ်
●စက်ရုံ / စက်ရုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ရုံသုံးစက်ကိရိယာများကိုပိုက်ခြင်း
[အတွေ့အကြုံမရှိ] 16,000 ယန်း ~
[အတွေ့အကြုံရှိသူ] နောက်ထပ် ဦး စားပေးကုသမှု
● JR Keihin Tohoku လိုင်း / Keihin Kyuko လိုင်း "Tsurumi ဘူတာ" ကားဖြင့် ၅ မိနစ် / JR Tsurumi လိုင်း "Asano ဘူတာ" ၇ မိနစ်လမ်းလျှောက်
Ota စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။
[ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေပိုက်ခြင်း၊ စွန်နက်မှူးလုပ်ခြင်း] လူမှုဖူလုံရေးအာမခံနှင့်အပြည့်အဝပါ။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ချင်သောသူတို့အဘို့တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကတိပေး!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်လူမှုအာမခံနှင့်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးသင်၌အတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းပင်နေ့စဉ်လစာသည်ယန်း ၁၆၀၀၀ မှစတင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်, အလုပ်အမြဲအလုပ်များဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနှင့်မြင့်မားသောဝင်ငွေချင်သောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်နေရာဖြစ်သည်!သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။
●ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စက်ရုံများနှင့်စက်ရုံအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်များလုပ်ခြင်း၊ ရေပိုက်ပြင်ခြင်းနှင့်ဓားလှောင်ခြင်းစသည့်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
●အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု
* လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည့်အလုပ်ခွင်
●တိုက်ရိုက် / ခုန်
# အလုပ်နှင့်အမြဲအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။အလုပ်မျိုးစုံရှိပါတယ်။ သင်အလုပ်လုပ်ရင်သင်အလုပ်လုပ်သလောက်ကြီးပွားနိုင်ပြီးငွေအမြောက်အများကိုပြန်ရရှိမှာပါ။လေးနက်သောလူများကြိုဆိုကြသည်!ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုအကဲဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်!
ဒါ့အပြင် ၀ န်ထမ်းတွေကဖော်ရွေ၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်လျှောက်ပါ။ထိုအချိန်တွင် "ငါ Genvers ကိုမြင်"
# ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
1-7-14 Hamacho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa ၏မြေပုံကိုကြည့်ပါ
Yokohama / Kawasaki တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုသည်
Ota စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်※"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။